Local News – Page 128 – Shwe Ba
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျခြင်းသည် ရောဂါပိုးကာကွယ်ရန်အားသာချက်ဖြစ်နေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပြော
L K T | February 10, 2020
တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်မြို့မှစတင်ပြန့်နှံ့လာသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် လက်ရှိတွင် နိုင်ငံအနှံ့အပြားသို့ ပြန့်နှံ့လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များလုပ်ဆောင်နေသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးစုစုပေါင်းသေဆုံးသူဦးရေ ၇၂၂ ဦးအထိရှိလာပြီး ကူးစက်ခံရသူဦးရေ ၃၄၅၀၀ ကျော်အထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ “International Gate Way ကရန်ကုန်မှာပဲရှိတယ်။ မန္တလေးမှာက နည်းနည်းပဲဆင်းတယ်။ ကွန်တော်တို့ စတက်လာတဲ့အချိန်မှာ ရန်ကုန် လေဆိပ်က ၃ သန်းပဲအတက်အဆင်းရှိတယ်။
ဗစ်​တိုးရီးယား အမှု တကယ်ပဲ​ ပြီးဆုံး သွားပြီ လား?
ဗစ် တိုးရီးယား အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာလာမေးကြတယ်။ အမှုက ပြီးသွားပြီဆို…၊ ဘာမှ လုပ်မရဘူးလား၊ ဒီအတိုင်းပဲ ပြီးသွားတာလား။ ငြိမ်နေတယ်နော်၊ ဘာညာ ဘာညာ၊ တချို့က အားမလို အားမရစိတ်နဲ့ မေးတာ ဖြစ်သလို၊ တချို့ကျ (ဒီကောင်တွေ ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ) ဆိုတာမျိုးဆွချင်တဲ့ အခံနဲ့ မေးတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီဘက်က တမင်ငြိမ်နေတာကို
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ရှိ/မရှိကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဓါတ်ခွဲခန်းတွင် ယနေ့ ညနေ (သို့ မဟုတ်) မနက်ဖြန်မှ စ၍ စစ်ဆေးနိုင်မည်
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ် စမ်းသပ်ရှာဖွေရာတွင် အသုံးပြုမည့် Reagent အခု ၁၀၀ ( ၂၅ ဦးစာ) ရန်ကုန်ကို ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး Custom ကိစ္စပြီးပါက ယနေ့ညနေ သို့ မနက်ဖြန်တွင် အမျိုးသား ဓာတ်ခွဲခန်း(NHL) တွင် စတင်စစ်ဆေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂ ရက်နေ့တွင် နောက်ထပ် Reagent အခု ၁၀၀ (၂၅ဦး)စာ Reagent
Shwe Moe | November 28, 2019
OIC says it welcomes prosecution in Myanmar Saudi Arabia,aleading member of the Islamic Cooperation Organization (OIC), has been sued in Myanmar by the International Court of
The trial at ICJ will bring globalization to the real world and address issues of national interest and interests.
The Gambia has filedalawsuit against the International Organization for Islamic Cooperation (OIC) in the International Criminal Court (ICJ) over the issue of displaced people in Rakhine
Shwe Moe | November 27, 2019
According to the Mizzima News, earthquakes have hit Myanmar in recent days, with four earthquakes per day in November 26. During the 26 November, there were three moderate
Dr Myat Nyar Na Soe submitsabill to dissolve Parliament with the support of the National Defense and Security Council
Shwe Moe | November 26, 2019
The constitutional amendment committee will discuss the 3,700-member constitutional amendment at the 13 th session of the Pyidaungsu Hluttaw. According to the bill’s joint committee and parliamentarians.The report,
Ko Ko Gyi says he welcomes Daw Aung San Suu Kyi, the consultant who will lead the case against the Bengalis.
The Netherlands welcomes Daw Aung San Suu Kyi,anational counselor who is leading the charge against the Bengalis in ICJ. Ko Ko Gyi, who is also chairman
The Tatmadaw says the slow pace of peace depends on ethnic armed groups
The government and the military are trying to achieve peace within the country, but whether the peace process is fast depends on the ethnic armed groups (EAOs), said
Shwe Moe | November 25, 2019
Since the government has setaprice hike, basic food prices have been rising since then. The increased meters have doubled from the original. The rise in prices
Newer 1 … 126 127 128 129 Older